Rehefa izany dia niainga avy hatrany ny zandary tao an-toerana nanao fanarahan-dia sy vonjy taitra. Noho ny hamaroan'ireo dahalo anefa dia niara-nisalahy ireo zandary sy tafika avy ao anatin'ny Faritra Anosy sy Androy. Nohamafisina ihany koa ireo fiambenana kizo mety handalovan'ireo dahalo. Omaly talata 02 jona 20 dia nifanehatra tamin'ireo dahalo ireo mpitandro filaminana, tao amin'ny alabe Ampotaka, Vokany. tafaverina manontolo ny omby mitontaly 285 ka efa natolotra ny tompon’omby. Misy dahalo miisa 3 ihany koa lavo nandritra ny fifandonana raha tsy misy naninona ny mpitandro ny filaminana.